Hydraulic ကို Power Pack ကို
WELCOME ------------ YONGXIANG ဟိုက်ဒရောလစ်
Asahydraulic cylinder manufacturer, Yongxiang Hydraulic provides diverse options for customers. Our experience and engineering expertise have delivered thousands of high-quality cylinders to metallurgy, mining, and vehicle industries. ပိုပြီး +
လျှပ်စစ် Hydraulic Pusher
ဟိုက်ဒရောလစ် IN ပရော်ဖက်ရှင်နယ်
Yongxiang Hydraulic ခြွင်းချက်စက်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်; သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကနေကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်း, အနိမ့်အသံအတိုးအကျယ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ရန်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနား CNC စက်တွေအလုပ်အမှုကိုပြုလာပြီနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
2015 & က ISO 14001: 2015 Registered ကုမ္ပဏီနှင့်ထုတ်လုပ်မှုက ISO စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ operated နေကြသည် Yongxiang Hydraulic တစ်ဦးက ISO 9001 ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းအကူအညီများအင်ဂျင်နီယာများထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် On-site ကိုဖြန့်ကျက်ဘို့မရရှိနိုင်ပါဖြစ်ကြပြီးသိသာထင်ရှားသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဝေးတစ်ခုသာဖုန်းခေါ်သည်။
နေရပ်လိပ်စာ: စက်မှုပန်းခြံ, Wujian မြို့, Jiangdu ခရိုင်, Yangzhou, တရုတ်